Mutevedzeri weMutungamiri weApple wekusiyana uye Kubatanidzwa achatsika pasi pakupera kwegore | Ndinobva mac
Apple's VP yekusiyana uye Kubatanidzwa kuti uburuke pasi pakupera kwegore
Nzvimbo nyowani inofungidzirwa naDenise Young Smith, uyo kwemwedzi mitanhatu anga ave mutevedzeri wemutungamiri weApple wekusiyana nekubatanidzwa makore matatu apfuura achishanda seApple Mutevedzeri Wemutungamiriri weNyika Yese Human Resources, chinzvimbo chaakauya mushure mekushanda munzvimbo dzakafanana kune mamwe makambani.
Asati atanga kutarisisa nezve rake nyowani basa, Denise anga atotanga kupindira mukusiyana kwevashandi. Mutauriri wekambani akasimbisa izvozvo Denise Mudiki kusiya kambani kwemwedzi minomwe mushure mekuchinja chinzvimbo mukati mekambani.
Mutauriri wekambani mumwe chete uyo akazivisa nezvekuenda kwaDenis Young kubva kuApple, azivisa munhu achamutsiva. Christie Smith, anga ari munhu achange achitungamira mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Christie akashanda kweanodarika makore gumi nemanomwe kuDeloitte muzvinzvimbo zvakasiyana zvinoenderana nekambani uye anozotaurira zvakananga kuna Tim Cook. Chirevo chinoenderana nekota yekupedzisira yegore muchikamu chekusiyana uye chekubatanidza chichaitwa neMutevedzeri weMutungamiri weVashandi Deirdre O'Brien.
Denise paakatora chinzvimbo chitsva kuApple, kare Ini ndaive ndataura naTim Cook kuti ndibude mukambani, asi Cook akakwanisa kumunyengetedza kuti arambe akamira kusvikira vawana chinogutsa chinotsiviwa nekambani, sekutaura kweTechCrunch, saka gakava rakatangisa rwendo rwake rwekuenda kuColombia, kwaakatora chikamu mumisangano yezvekusiyana uye kwaakange akaturikirwa zvakaipa zvikamu zvehurukuro yake, yanga isiri iyo chikonzero cheiyi shanduko munzira yedhipatimendi iri.
Ini ndinonzwa kushungurudzika kana kusiyanisa kana izwi rekuti kusiyanisa richinzi vanhu vemavara, vakadzi kana nharaunda yeGBBT. Panogona kuve nemabhenji gumi nemaviri ane maziso ebhuruu mune imwe imba, vanhu ava vanogona zvakare kuverengerwa muchikamu ichi sezvo vachizopa akasiyana hupenyu hupenyu.
Nguva pfupi apinda mukukakavadzana, Denise akataura kuti mazwi ake ivo havana kumiririra Apple yemhando dzakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple's VP yekusiyana uye Kubatanidzwa kuti uburuke pasi pakupera kwegore